लकडाउनमा गाउँ फर्किएकाहरुले बाँझो जमिनमा खेती कसरी गर्ने ? – RemitKhabar
लकडाउनमा गाउँ फर्किएकाहरुले बाँझो जमिनमा खेती कसरी गर्ने ?
भनिन्छ, १२ वर्षमा खोला पनि फर्कन्छ । अहिले गाउँघरमा खेतबारी हरियो बनाउने युवा शक्ति फर्किएको छ । कोरोना भाइरसको जोखिम बढेपछि सहरमा रहेका धेरै मानिस गाउँ फर्किएका छन् । लामो समयपछि गाउँ फर्किएकाहरु आफ्नो खेतीपातीमा व्यस्त छन् ।
व्यवसायिक पशुपालन गर्ने हो भने पहिला घाँस लगाउनुपर्छ । पशुलाई आवश्यक पर्ने घाँस तयार पारेपछि मात्रै पशुपालन गर्न विज्ञको सुझाव छ ।
यस्तै, भिरपाखा भएको र सम्याउन नमिल्ने पाखाबारीमा फलफूल र डाले घाँसको खेती गर्न सकिन्छ । पहिरो जाने ठाउँ छ भने अम्लिसो, पाउलोनिया र बाँस लगायतका बोटबिरुवा रोप्न सकिन्छ । यसले पहिरो रोकथाम गर्न सहयोग गर्नुका साथै आम्दानी पनि बढाउँछ ।
यस्तै, सुर्कासुर्की जमिन छ भने अदुवा, बेसार, अलैँची र कफीलगायतका बिरुवा लगाउनुपर्छ । तर बिरुवा लगाउँदा उपयुक्त हावापानीबारे किसानले प्राविधिकसँग सल्लाह लिनुपर्छ ।बाँझो जमिनमा कस्तो उत्पादन ?
सुरुमा बाँझिएको जमिनमा खनजोत गर्न गार्हो हुन्छ । यस्ता जमिनमा खनजोत अघि सिँचाइ गर्नु उपयुक्त हुन्छ । पानीले भिजेको जमिन कमलो हुने हुँदा खनजोत गर्न केही सजिलो हुन्छ ।
सहयोग गर्न सरकार तयार
आउँदो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले बाँझो जमिन खेर जान नदिने रणनीति लिएको छ । भूमि बैंक स्थापना गरी खाली जमिनलाई उपयोग गर्ने सरकारको नीति छ ।
यस्तै कृषि क्षेत्रमा थप आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र विशिष्टीकरण गरी उत्पादकत्व तथा उत्पादन वृद्धिमा जोड दिइने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
लकडाउन बढाउन र सरकारी बिदाबारे छलफल गर्न समन्वय समितिको बैठक बस्दै
प्रदेश २ मा दैनिक हजार नेपाली भारतबाट भित्रिँदै, सीमामै र्‍यापिड जाँच